मैले पाएको मत पार्टीको ठूलो सफलता : रावल « Name of Truth News : News Portal in Nepal
मैले पाएको मत पार्टीको ठूलो सफलता : रावल
प्रकाशित मिति : २०७८, मंसिर, १४, मंगलवार १६:५४
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दशौँ महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी डा. भीमबहादुर रावलले आफूले पाएको मत आफ्नाे र पार्टीको ठूलो सफलता भएको बताएका छन् ।
आधिकारिक घोषणा नभएपनि मत परिणाम अनुसार अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी भएको जानकारी बाहिर आएलगत्तै डा. रावलले आफूले पाएको मत पार्टी र आफ्नो ठूलो सफलता भएको बताएका हुन् ।
उनले ओली पक्षले उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नदिने योजनाका बीच पनि आफ्नो संघर्षका कारण निर्वाचन भएको बताए । रावलले भने, ‘मलाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नदिने योजना बनाएको अवस्थामा निरन्तरको संघर्षपश्चात उम्मेदवारी दिएर जति मत पाएको छु त्यो मेरो र पार्टीकाे लागि ठूलो सफलता हो ।’ आफ्नो संघर्षका कारण पार्टी केही हदसम्म लोकतान्त्रिक भएको उहाँले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिए ।